Akhriska iyo aqoonta! W/Q: Jamaal Abdinaasir | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Uncategorized Akhriska iyo aqoonta! W/Q: Jamaal Abdinaasir
Akhriska iyo aqoonta! W/Q: Jamaal Abdinaasir
Goorta loo jalleeco xishoodka aqoonta, waxa is casila jaahilnimada, waxa isa soo sharraxa anshaxa quudinta maskaxda oo loogu baahdo fulinta nolosha.
Buugta ha u akhrin inaad tartan ilbaxeed ama akhriyaa noqosho ku noqoto ee u akhri dulucda shiilan ee waayuhu isu beddelayo si fahanka maraaxisha iyo heer fekerka ka jira nolosha aad u ogaato. Tartamayaasha casrigan ee u maskax qaatay akhrinta buuggta kala geddisan, waxay tilmaameen inay jawaab u waayeen waaqicooda, sidaasna ay u noqdeen tartamayaasha maskaxda qallalan.
Akhriska u maskax furnow, bishimahana ha wehliyo, dooddana ha caqliyeyso sidaasna furitaan nolol ha u timaado.
Balan-qaadka ay fidiyaan kuwa doonta akhriska soo fuulay waxay marar badan ku digriyaan, muhiimadda akhriska iyagoo wacaal iyo qoraalba ku soo bandhiga, haddana aan garan daruufta nafsiga ah ee ka kaxeysa mowjadda akhriska.
Way ballaaran tahay go’aamada masiiriga ah sida looga hortago, tani go’aan weyn ma’ahan in aad wax akhrido oo dadku waxay la yimaadeen hannaan smart ah oo qeexid iyo yoolba leh.
Waxaa doodda xiiso u yeelo cadeymaha maan-gal ka ah oo xigashadeeduna tahay heerka akhriskaaga.
Dadka ku hanaqaaday akhrinta (Smartiga) ah waxay wax badan la daalac sanyihiin macaanka akhrinta. Haa, taasi waan idin la qabaa macaanka iyo caqliga iskaashigooda waa wadar, laakin iftiinka iyo mugdigu way is lagdaan. caqliga ma lagdo iftiinka oo wuu bishaareystaa caqliga. Waa tii laashin: Xasan Abuukar Calasow “Abaaji” yiri:
Ma ogtahay iftiin li’i gudcura, Waa aqoon li’iye
Jihaada akhriska ballaaran waa mid nuxur leh oo halbeeg iyo ujeed maan-dhowrinimo leh sidaas waxaa soo jeediya qul-qulka bishimaha. Bishimuhu soo ilbax kama dhigaan maanka?
Haa, Bishimaha waxay dallacsiiyaan akhriska iyo ogaalka. Sabab kasta oo nolosha laga doonayo waa mid ku jirta baaris iyo soo jeedin, baaristu waa maskax-shiilnimo, soo jeedintuna waa bishimihii casriyeysnaa.
Loollanka aqoonta iyo fahankeeda garasho loogu jiro wuxuu dhaxal ahaan u reebay taran ballaaran oo kaa shaday, daba-galka sohdimaha aqoonta iyo fahankeeda. Xulufada is biirsatay waxay ahaayeen fekerka oo sal u noqday dood cilmiyeed, naqdiga oo sal u noqday dood cilmiyeed isagana. Asalkooduna waxay ka soo duuli jireen ogaalka waxa ay ku doodayaan, si umuurta qeexan ay ugu meeleeyaan wacyi garasho iyo fahan. Dadka qaarkii haddii lagu xujeeyo halgan, waxay odhan lahaayeen diyaar ma nihin, haddii qol furan lagu yidhaahdo oradoo gala orod bay ku gali lahaayeen. Taasina waa halbeegga maskaxda oo taabacsan wax kasta oo aan daal iyo dhibaato keeneynin in uu aadamaha xiiseeyo. Akhriskana mowjaddiisu way sugan tahay, umana baahna xiiso gooni ah kaliya la kaalay iftiin ballaaran.
Waxa aan fahmay wax badan oo aan akhrinaa aynu u qalmin inaynu akhrino, taasi ayaana sababtay in dhibicda akhriska uu ruux kastaahi walaaqo. Muran kama taagno in wax badan la akhriyaa, se’ u qalmidda waxa la akhrinayo waxay tilmaameysaa cadaadis. Shacni iyo maskax furan waxay abuurantaa goorta akhrisku kal furnaado, ruux kasta uu dabbaqo heerkiisa aqooneed iyo mabaadiba. Akhristayaasha ku loollama buuggaagta tirada badan waxay wax badan ka indho furan yihiin kuwa caamada ah laakiin dhibtu waxa weeyaan waxa wax loo akhrinayo uun waa asaaggaa iyo iwm.
Shumuca goorta ay nafta u baahato waa goorta qalinku uu nolosha maamulayo, indhahana uu ilaaliye yahay. Awood iyo laab lakac uma baahna bulshada dabarka ku weyn yahay kaliya nooleynta naftooda baa kacaan ballaaran oo akhriska iyo baarista loogu baahdaa.
Ufurnoow akhriska, garashadana ha taageerto, timaadadana ha sahmiso, ogaalkana ha soo bandhigo, fahankana ha sinnaado. Sidaa buu xaalka nolosha aadanaha ku fiican yahay.
Anshaxa iyo falcelinta, waxay joogteeyaan qiyamka insaanka iyagoo rumeyn iyo fasiraad kala shaandheyn ula tiigsada bogagga bini’aadamka.
Wax badan feker, wax yar xukmi. Ma xasuusataa qaaradooyinka juquraafiyadeed ee beri-samaad la iska xaddiday, iminka casrigan la joogo waxaa tiro badni la yimi fekerka oo gogoshiisa ku farsameeyay in la iskaga gudbo qaarad ka qaarad. Taasina waxay tusmo iyo tusaalaba u ahaatay anshaxa fekerka.
Baxnaanin waxaa iska leh maanka, dhugmana waxaa iska leh fekerka, dabaalashana waxaa iska leh natiijada. Ma sahlana inaad ilbaxnimooyinka la tartanto, laakin way sahlantahay inaad baraarugto oo sahay qaadato si aad garta garashada libinta ugu hubsato. Caaqilka laabta furan waa mid ku sii jeeda garoonka fahanka, laasima doodda halxidhaalooyinka ay hareeyaan, si uu dar-daaran fogaan arag uu ugu jeediyo. Taasina waxay u lahaatay ruuxa fekradda u fekiro sida ugu tiirka adag.
Sida badan fekradda lama jeclaado, haddaysan halxidhaale adag bur-burin karin. Dadaal ayaan u bixinnaa inaan fekradda u gudbinno sida ugu macquulsan, haddana fekraddii ayaan taageero ina siineynin. Sidaas waxaa ugu wacan fekradda waxaa daris joogta ah la ah (logical philosophy) caqliyadda falsafadeed oo kugu riixeysa in si abaabulan loo fekiro, fekerkaasna la hubeeyo, loona qoondeeyo habka loo fekerayo, iyo aragtida ka dhalaneysa in ogaal loo helo.
Fekradda u hormari si waaqiciyan, xarafkeedu ha ahaato hab wanaagsan, ficilkeeduna ha ahaato dhaxal sooyaal. Cibaarooyinka nolosha waa falsafad, qibraddeeduna waa xeeldheeri dulqaad, gunteeduna waa mintidnimo garasho, doodeeduna waa cadeymo maan-gal, nasabkeeduna waa akhris, oogisteeduna waa cadaalad. U akhri fekradaha sida waaqica ku farayo ee ha u akhrin sida miisaanka fekradda sidato.
Hoggaanka fekradaha waaweyn waa kuwa aalaaba ku qotama bandhig ilbaxeed, adigu ka billow fekradahaaga waaweyn si ay kuu ilbaxeeyaan oo ay kuu tusaan walbahaarka iyo qirashadiisa dhibaato.
U noolow sida ugu fekerka wanaagsan, u furnoow sida buugta kala quwadaha weyn.
Nolosha waa dugsi xaqiiq ah, ayna mudan tahay in arday run ah la noqdo, laakin waynu ka fogaannaa ardaynimadaas oo aynu ugu horboodnaa macallimnimo. Qiyaasta ardaynimadu waa uu doodaa, lana doodaa barihiisa sidaasna ay waafaqsan tahay aragti gudbinta noole.
Fekeraagu waa uu naawilaa ( jecleystaa) ardaynimada, wuxuu halbeegaa masharaafta sii deysa biyaha si ay u caawiso dhinacyadeeda oo ku tiirsan cowska.
Ha u aabo yeelin maskaxda duugoowday, u sameey xeelado nolol, una sameey tab akhris fara badan. Sidaasna ajarka maskax nooleynta u qaado.
U dhiibo fekraddaada sida ugu habboon, una daraaseey sida ugu qotada dheer, sidaas waxaa qabo mufakiriinta fekradaha bishaareysta.
Waa inaad jeclaataa in bini’aadamka oo dhan uu fekero, una fekero aayihiisa nolol iyo mid deegaan laakin gogoldhigga nolosha laguma sheegin ee la xadreey in nolosha badi ay fekerto una fekerto bini’aadamka aan fekerin. Yagleel guusha aan walbahaarka sidan, u qushuuc (Eebbe SWT) oo inoo furay sanduuqa fekerka si uu nolosha iyo aragtideedaba aan ula tartanno.
Caashaqa ha weynaado, qaayaha fekradaha nolosha ilbaxeeyayna ha jiraan, niyad jabkuna ha jiifto.
Dhallinyaro, nolosha casrigan waa mid muuqato iyo mid aan muuqan ee fekradaha aan ugu fekerno qaab muuqato iyo ma muuqato ah ba!
Itaalkaaga inuu roonaado waa dood xasaasi ah, balse, qishka aad ku mari rabto xilkasnimada nolosha ayaa ka xasaasisan.
Is qabadsii is diidooyinka ay noloshau qorsheysatay hababkii la isu laheysiin lahaa, mataano iyo xurmo waa wada noolaansho dhal-dhalaal ah. Nolosha firqooyinka ay laasimatay waxaa daah-furay noole ka arradan hoggaanka saxnaanta, waxaana soo baxay kartida qaladaadka si wajiga firqooyinka ay u doodaan goor kasta.
Aqoonta in caajisnimada lagu raadiyaa waa doqonnimo, in qalad lagu sar-goostaana waa qaleel maskax! Cadaadiska ay sameeyaan kuwa ku mahdiyay aqoonta, waxay u jileeceen dabar-goynta noole doonaya baxnaanin fogaan arag ah. Waxay shardi asaasi ah la galeen aqoon aan xirfad laheyn.
Xirfaddu waa shardi ay nolosha saxiixatay, noole la ambaqaadana ay sameysatay, taariikh-sooyaalna ay ka sameysatay bogagga warinta taariikhda.
Farxadda aqoonta ayaa bar-baarisa, garashadana tijaabada ayaa abuurta, khibradduna waxaa soo saarta fahanka nolosha laga helayo.
Qiimaha aqoonta ay leedahay waxaad wayddiisa guul-darada, iftiinkeedana waxaad weydiisaa guusha. Qiimaha aqoonta leedahay waxaa dulucdeeda yaqaanno ruux guul-darraystay, sharafkeedana waxaa yaqaanno ruux guuleystay! Waxaynna labadooduba isu jiraan fahanka iyo yoolka.
Tijaabada ayaa noqotay xawaare sugan, ilbaxnimadeeda ayaa furtay casri tiir leh, Murtideedana waxay noqotay aqoonta!
Cududda garashada ayaa haleeshay banaan-baxa lagu hayo garaadka, iyadoo adeegsaneysa keydkeeda waayo-aragnimo. Halkaana ay soo if-baxeen, waayeelka aragga dheer!